Nabadoon Eedeeyay Galmudug Iyo Puntland – Goobjoog News
Nabadoon Eedeeyay Galmudug Iyo Puntland
Nabadoon Cabdicasiis Aw Yuusuf Xaarin oo kamid ah waxgaradka waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa ka hadlay sababta keentay jabinta heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ka dhacay dhowaan magaalada Gaalkacyo.
Nabadoonka ayaa sheegay in labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ay si isku mid ah u jabiyeen heshiiska xabad joojinta ahaa islamarkaana ay aaminsan yihiin in xaaladda Gaalkacyo ay u bud dhigi karaan odayaasha dhaqanka.
“Waxa weeye Galmudug qeyb kamid ah baa jabisay heshiiska nimankani Puntland ahna sidaas oo kale, marka meesha waxaa ku dhiban waa dadkii shacabka ahaa waana ka xumahay runtii, masuuliyadda labada maamul baa qaadanaya sababtoo ah magaaladan iyaga ayaa labadeeda daraf kala jooga oo ka taliya” ayuu yiri nabadoonka.
Nabadoon Cabdicasiis Xaarin ayaa soo jeediyay in la ballaariyo wada hadallada nabadeed islamarkaana laga dhabbeeyo in meesha laga saaro isxagxagashada oo nabadda laga wada shaqeeyo.
Magaalada Gaalkacyo waxaa ka taagan xaalad yara kacsan, dadka magaalada ayaa wadnaha farta ku haya iyadoo ay aad uga baqdin qabaan dagaal u dhaxeeya labada maamul ee Galmudug iyo Puntland.